I-Caribbean Ilizwi lafika kwisiNgesi ngendlela yeSpeyin
Ngokungafani namagama amaninzi aseSpeyin nesiNgesi ngenxa yeembali ezabelwana ngazo ngeLatini, "iqhushu" yafika ngesiNgesi ngokusuka kwiSpeyin, apho okwamanje iprogram ye- huracán . Kodwa abaphandi bamaSpeyin nabanqobileyo baqala ukuwathabatha ilizwi elivela eTain, ulwimi lwaseArawak oluvela kwiCaribbean. Ngokwamagunya amaninzi, igama lesiTain i-huracan lithetha nje "isiqhwithi," nangona imithombo engathembekiyo encinci ibonisa ukuba nayo ibhekisela kwisithixo somoya okanye umoya obi.
Eli gama laliyindalo yendalo yabaphenyi baseSpain kunye nabanqobileyo ukuba baqokelele kubemi bomthonyama, kuba iimoya ezinamandla njengeziphepho zeCaribbean zaziyinto engafanelekanga yemozulu kubo.
Inyaniso yokuba amaSpeyin azisa igama kwisiNgesi, isizathu sokuba igama elithi "iphepho" libhekisela kuma-cyclone ashushu aphuma kwiCaribbean okanye eAtlantic. Xa uhlobo olufanayo lwesiphepho luvela ePacific, luyaziwa ngokuba yi-typhoon (okokuqala igama lesiGrike), okanye i- tifón ngesiSpeyin. Kukho umehluko omncinci kwindlela iziphepho zikwahlula ngayo ngeelwimi, nangona kunjalo. NgesiSpeyin , i- tifón ngokuqhelekileyo ibonwa ngokuba yi- huracán eyenza iPacific, ngelixa ngesiNgesi "iphepho" kunye ne "typhoon" zibhekwa njengezintlu ezahlukileyo zeziphepho, nangona umahluko kuphela apho zenza khona.
Kuzo zombini iilwimi, igama lingasetyenziselwa ukubhekisela kwisifaniselo kwinto enamandla kwaye ibangela ingxakini.
NgesiSpeyin , i- hurucán ingasetyenziselwa ukubhekisela kumntu onqabileyo.
Ngelo xesha ulwimi lwesiSpanish lwamkela eli gama, i- h yayikhankanyiwe (ayicacile ngoku) kwaye ngezinye izihlandlo yayisetyenziswa ngokungahambisani nayo. Ngoko igama elifanayo kwisiPutukezi saba yi- furacão , kwaye ngasekupheleni kwe-1500 igama lesiNgesi ngamanye amaxesha lalibizwa ngokuthi "umncinci." Kuye kwasetyenziswa ezinye izipelenti ezininzi kwaze kwaba yilapho igama liqiniswe ngokusisigxina ekupheleni kwekhulu le-16; UShakespeare wasebenzisa isipelingi "sempethu" ukubhekisela kumanzi.
Igama i- huracán ayinakunyulwa xa libhekisela kwiimvula ezinqabileyo. Isetyenziswe kwesi sigwebo: El huracán Ana trajo lluvias intensas. (Iintshukumo uAna zazisa imvula enzima.)
I-American Heritage Dictionary, iDiccionario de la Real Academia Española , i-Online Etymology Dictionary
Isikhokelo sokusebenzisa i-Mandarin Xhosa Numbers ngokuchanekileyo
Indlela yokudibanisa "Yi-Plaire" (ukuNceda) ngesiFrentshi
Iqonga leTyelelo leLunaudaye - isiFrentshi isiNgesi kwiCandelo leNgcacile
Amagama okuThutho ngeSpanish
Iintsholongwane zithetha 'ngaphandle kokuba'
Isigama Ukuchaza izinto eziphathekayo
Ukutshitshiswa kwamahlathi eKhanada
Iingelosi zeBhayibhile kunye neMimangaliso: Idonki kaBhileham iThetha
I-College College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ngakanani ixesha kufuneka ndichithe ukufundelwa kwiKholeji?
Umgaqo-nkqubo wezeMali kwi-1960s no-1970
Indlela iTurbocharger isebenza ngayo kwiInjini